Aspire Higher bụ atụmatụ ntinye ego na-elekọta mmadụ nke gbanwere ụzọ anyị si eme ọrụ mmekọrịta mmadụ na mmepe na Africa.
Ihe omume a malitere mgbe Reckitt bịakwutere Wits gbasara mmekorita maka ntinye ego ego ha na-elekọta mmadụ, nke ezubere inyere ụmụ agbọghọ aka ịnweta na itinye aka na agụmakwụkwọ ahụike mmekọahụ. Dị ka CAPSI, anyị jiri ohere a tinye ego site n'ịkwado ya na mmemme ọchụnta ego ọha na eze na mmemme ọhụrụ nke sitere n'ọtụtụ ogidi nke ọrụ ebere na itinye ego na ọha mmadụ.
Nke a bụ ohere magburu onwe ya iji soro ndị ọrụ nzuzo na-arụ ọrụ iji dozie okwu gbasara ọha mmadụ. N'okwu a, ọ bụ ihe otiti nke HIV / AIDS, yana ihe metụtara ime afọ ndị dị afọ iri na ụma na ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ. N'inye iwu nke ụlọ ọrụ abụọ a, ọ bịara doo anya na ọ dị mkpa ịmepụta ọrụ ga-ewulite na mmemme Ụlọ Akwụkwọ na Ụlọ Ọrụ ma na-ejikwa ahụmahụ ụlọ ọrụ nkeonwe na-edozi nsogbu a na ọha mmadụ.
Mgbe o nyechara oku maka ngwa maka ụmụ akwụkwọ postgraduate na Wits, ndụmọdụ 30 natara n'aka ndị isi ụmụ nwanyị na naanị mmadụ anọ mere ya na ndepụta aha ya bụ, Girllead SA, Aganang, Imbokodo Launchpad na The Gratitude Project.
Ọhụụ anyị maka Aspire Higher
Anyị chọrọ ịgbanwe ọdịnihu maka ndị na-eto eto Africa. Ọhụụ anyị bụ na 100% nke ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ nọ na Sub-Saharan Africa ga-enweta agụmakwụkwọ ahụike mmekọahụ site na 2025.
Dị ka CAPSI na Ụlọ Akwụkwọ (na mmekorita ya na ndị mmekọ anyị), anyị na-atụ anya na ọrụ a ga-enye aka n'ịgbasa nsogbu mmekọrịta ọha na eze na ahụike mmekọahụ site na ịzụ ahịa mmekọrịta ọha na eze, mmekorita, mmepụta ihe ọmụma, na, nke kachasị mkpa, ike ogologo oge nke ụmụ agbọghọ. Nke a bụ ihe dị iche na ọrụ a. Ọ bụ ihe zuru oke na nke zuru oke. Olileanya anyị, na nke ndị mmekọ anyị, bụ na enwere ike ịmegharị nke a na mba ndị ọzọ ebe ha abụọ Gilead na Reckitt nwere arụmọrụ.
Zute ndị ikpeazụ
Nwa agbọghọ SA bụ ọgbakọ na-ezube inye ụmụ agbọghọ ike n'ọkwa ọ bụla site n'ibelata afọ ime na-enweghị atụmatụ na HIV. Kirie ihe onyonyo a ka ịmatakwu gbasara ha Chọta Elu Journey.
Project ekele bụ nzukọ anaghị akwụ ụgwọ bụ otu ìgwè ụmụ agbọghọ na-akwado nke ebumnobi ya bụ ịbawanye ohere ịdị mma site na ngwọta digitized maka ụmụ agbọghọ ndị dara ogbenye. Kirie ihe onyonyo a ka ịmatakwu gbasara ha Chọta Elu Njem.
Imbokodo Ọrụ Launchpad bu n'obi ileba anya mmetụta HIV/AIDS n'etiti ụmụ agbọghọ na-eto eto na ụmụ agbọghọ nọ na obodo South Africa. Ọ na-emepụta ọnọdụ maka ụmụ nwanyị na-eto eto na-agbagha àgwà ọha mmadụ n'ebe HIV / AIDS nọ.
Mmemme Ikpe Ikpeazụ
Ndị ikpeazụ nke asọmpi Aspire Higher Competition gosipụtara ọrụ ha ma gosipụta mmetụta ha na otu ndị ikpe gosipụtara onye isi anyị, Dr Bhekinkosi Moyo, DJ Sbu, onye ọchụnta ego nwere mmetụta, onye ọrụ enyemaka na onye na-agụ egwu na-enweta ihe nrite, Dr Michael Reid nke Sayensị Gilead na Peter Edwards nke Reckitt.
Ndị nnọchi anya otu nke ọ bụla gosipụtara nsonaazụ njem ha nye ndị niile bịaranụ, na-akọwapụta etu ha siri jiri akọ mejuputa mmemme na jikwaa ọrụ ha site na nkwado ndị nkwado nyere ha. Otu ọ bụla n'ime otu ahụ gosikwara otu ha siri nwee ike itinye aka na ngwọta nsogbu ọhụrụ nke kwalitere ahụmịhe nke obodo ha amapụtara.
Imeri asọmpi bụ Imbokodo Launchpad nke onye nchoputa ya, Jazzman Simalane nọchitere anya ya.
Imbokodo Launchpad Enyere ya £80 000 (ihe dị ka R1 500 000), nke ga-aga n'ihu n'ịkwalite mmejuputa oru ngo a iji nye nkuzi gbasara ịdịmma mmekọahụ na ịmụ nwa nye ụmụ agbọghọ nọ na obodo Tsakane na Johannesburg, South Africa.